Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji igwe kwụ otu ebe na okporo ụzọ Colorado? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Maapụ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na Colorado - ịza ajụjụ ndị a
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji igwe kwụ otu ebe na okporo ụzọ Colorado?
Ndị na-agba okirikirikwesịrịkwe ka ụbọchị 15-20 gaa njem ahụ. Enwere ike ịme njem ndị a na-akwado n'oge ọbụlagodi. Idinggba ugwuigwe kwụ otu ebebụ oké ụzọ njem ndịNzọ ụkwụ, ma ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịmanye ma ọ bụ buru igwe kwụ otu ebe site na snow tupu oge ahụ na ụfọdụ nke steepụ, ugwu ndị dị egwu.
N’isiokwu nke taa, anyị chịkọtara igwe kwụ otu ebe, gazie n’okporo ụzọ ụkwụ nke Colorado, ma mee njem igwe kwụ otu narị na iri ise n’etiti Denver na Breckenridge Colorado ilzọ ndị Colorado na-agbatị maka 867 kilomita n’etiti Denver na Durango Colorado ilzọ ndị Colorado na-agbatị gafee mpaghara ọzara isii, asatọ ugwu ugwu na ihe ka ọtụtụ n'ime ụzọ ụkwụ karịrị 10,000 ụkwụ yabụ ị ga-enweta ọtụtụ echiche alpine ndị ahụ wee hie ụra na bivouac n'abalị ụnyaahụ nke a bụ nchọpụta dị n'èzí helium bivouac echere m na Ed tinyere ụlọ ntu otu onye tent m chere Nke a bụ ezigbo ụlọ ntu nke mara mma, nke ahụ bụ ntọala ya niile, ọ bụrụ na m ga-eme nke a niile, ana m ewere bivy ka ọ bụrụ ntakịrị claustrophobic na ebe ahụ na mbụ. Emechara ya, anyị agaghị enwe ọtụtụ eserese site na ụbọchị mbụ naanị maka na anyị nwere nsogbu GoPro na ihe ndị ọzọ enwere ọtụtụ ịrịgo ọ bụla, ị chọghị ịhụ m ka m na-akụ otu akụkụ abụọ na mpako a obere taa nke bụ na njedebe nke ngalaba nke atọ bụ a otutu fun m nwere ọtụtụ nke gbagọrọ agbagọ downhill l stof na anyị kpam kpam chọrọ ya na njedebe nke ụbọchị otú ụbọchị nọmba abụọ ebe a anyị na-, ọ na-aga na-ezi a Ọtụtụ ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ taa ga-adị ihe dịka kilomita iri asaa na ise, yabụ ọ ga-ekpo ọkụ ọzọ taa, ikekwe nso nso ogo 100, oge oyi mechara gafee anyị ebe a na Colorado, oge ọkọchị niile anyị gara kilomita iri abụọ na ise na njem 75-mile gburugburu Ọzara iji banye Colorado -Trail nloghachi, na anyị na-na a kpam kpam kpughere ngalaba ebe a, super hot, anyị na-na-kụrụ aka ala otú ị na-eme azụ n'ebe ahụ, ee anyị? ha abuo di nma ma nwekwaa ubochi mgbe mbu 1 ụkwụ di nma ma obu ihe nlere anya mgbe ayi nwere igwe ojii ma anyi nwere ihe ichoro di nma nke oma, ikuku di otutu mana otutu akuku na mpụga a lookwhoo m hụrụ n'anya ndị ahụ na-agba ịnyịnya njem njem a dị mma, n'eziokwu, na-ahapụ naanị gị na ndị mmụọ ọjọọ gị, na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ site n'echiche gị na m na-ekwu, ịnụ ụtọ mpaghara dum dị ịtụnanya m na-ekwu, anyị apụla ebe a na Colorado Trail, nke ahụ abụghị kpọmkwem ihe osise Coloradotrails ịlaghachi, mana ọ bụ ihe ịtụnanya ịbụ ebe a, ọ na-adị mma, anyị nọ ihe dị ka otu narị kilomita na Colorado -Trail ma mechaa nke ikpeazụ? Mee njem gburugburu gburugburu nke anọ ma maka narị kilomita gara aga enwebeghị ihe ọ bụla gbasara ụlọ oriri na ọ anythingụ restaurantsụ ma ọ bụ ihe ọ bụla mechara mee ebe a, 100 kilomita na anyị hụrụ nkwụsị ebe a dị mma, ọ bụ ụlọ oriri na ọ saụ saụ saloon na a ụlọ ahịa ka anyị wee banye? Anyị were akara uhie Red Bull na ụfọdụ Coke iji weghachite shuga n'ime gị. Anyị na-achọ ibute oke mmiri ozuzo ọzọ na-agafe ha kwa ụbọchị taa bụ ụbọchị atọ ka anyị wee ghara ijide n'aka na anyị nwere ike ịpụ na nke a n'ihi na anyị 'Na-arịgo n'okporo ụzọ na nke ahụ bụ ebe oké ifufe na-adakarị ka anyị wee hụ otú ọ si aga. Nkume ndị a n'abalị ụnyaahụ anyị mara ụlọikwuu anyị n'elu Kenosha Pass ma jikọta ya na Coloradotrail n'akụkụ nke ọzọ nke 285 na Ọ bụ ya, ọ bụ ihe niile gbasara gị, enwere naanị ọtụtụ ojiji dị na osisi aspen siri ike ị nwere ihe ndị a niile dị ka Georgia na ihe dị ebe a na anyị ga-agafe ebe a n'oge na-adịghị anya m na-anwa ịgbada n'otu isi iyi mmiri dị n'okpuru ebe a N'ala, aga m ehichapụ ụfọdụ mmiri. Abụ m n'ụzọ niile, ọ ga - abụ slog taa, anyị ga - abụ velcro na - abụghị akụkụ ern eche m na ọ bụ Georgia Pass na anyị ga-agbada Breckenridge n'abalị a, ma eleghị anya nọrọ n'obodo dị ka ime ụlọ nkwari akụ ma mesịa m laghachi na idebe Ọla kọpa Ma eleghị anya, ka Leadville echi, ma mmadụ, ọ bụ nnọọ ihe dị mma Gbaa ịnyịnya m nwere obi ụtọ maka ụdị ịkwọ ụgbọala ebe a ebe ọ bụ naanị eziokwu a otu egwu ma ee ka anyị rute nke ahụ ma ugbu a anyị ' Ọ bụrụ na ị gbadata n'obe ma na-achọ mmiri na-ehicha ebe niile, ị ga-elezi anya maka ndị na-egbu egbu n'ihi na okwute ahụ bụ naanị mma kwesịrị ekwesị Oh nwa nwoke mara mma, anyị ga-enweta ya na akwa mmiri anyị jidere gaa na anyị chọtara mmiri, nke ọma, ị gaghị enwe akpịrị ịkpọ nkụ ọzọ ma ọ bụrụ na ị daa Colorado Trail chọrọ ime, jide n'aka na ị ga-eweta ịgba ahụhụ gị, ị ga-achọ ya, yabụ m na-eji ahịhịa ọka emebere iji dabara na mmiri mmiri mgbe niile, ya mere ọ rụpụtara nke ọma ugbu a.
You maghị ihe dị na mmiri ahụ, yabụ na ọ dị mma iji hichapụ ya kpamkpam dị iche. Nweta ole na ole n'ime obere ogige ndị ahụ nwere 75 kilogram nke gia na ị gafere ya wee ghaghachite azụ ga-ejidekwa ibu ahụ na-ejigide azụ azụ kpamkpam, ọ bụ ezie na ọmarịcha ọmarịcha echiche dị mma ebe a si n'elu Kenoshawe dị njikere Na-agbadata ndị fọdụrụ na Okporo Coloradozọ Colorado na ịdaba brik? Echere m na anyị ga-ada ma rịgoro azụ iji rute mpaghara Breckenridge, mana ee, echiche ndị a bụ ara ọgbụgba ka anyị na-agbada Georgia gafere kpakpando James na-amalite n'ihu mgbe ụbọchị ole na ole dị egwu na Col Orado Endedzọ Anyị kwụsịrị njem anyị na njem njem gaa mpaghara Breckenridge Frisco Achọrọ m ịkele gị na nkwari akụ Frisco anyị nyara na obere oge na ụmụ okorobịa a jidere n'aka na anyị nwere ebe anyị ga-anọ ya mere ekele ha na mụ na Ed anyị 'Anyị na-ama na-atụ anya na anyị ọzọ bikepacking njem, Olileanya anyị nwere ike ime a obere ihe na Colorado Trail
Ebee ka m nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè m na Colorado?
5 Ihe ịma akaColoradozọ Cygba Igwe na Colorado
Trail Ridge Road (Rocky Mountain National Park) Anya: 28 kilomita (45.1 kilomita)
Nnwere Onwe Gafere. Anya: kilomita 37.6 (kilomita 60.5)
Ọnụ ọgụgụ kasị elu n'ugwu na akụkọ ihe mere eme. Anya: 55 kilomita (88.5 kilomita)
Landhụnanya Loveland. Anya: kilomita 19 (kilomita 30.6)
Hey ụmụ okorobịa, anọ m ebe a na Wheat Ridge Cyclery na Wheat Ridge Colorado dị njikere ịbanye ma gbaa ajụjụ akụkọ banyere ịgba ịnyịnya ígwè Ron Kiefel si otu ndị ama ama 7-Eleven na-agba ịnyịnya. Nna ya bụ Eugene tọrọ ntọala Wheat Ridge na 1973 na elu nke 750 ụkwụ a 750 square ụlọ kemgbe ahụ ọ enwetatụbeghị obere, ka anyị lelee ya! Gwa m obere ntakịrị gbasara akụkọ a ọzọ na obere akụkọ banyere ya malitere na nna gị ee nna m bụ onye ode akwụkwọ n'ụlọ nkwakọba ihe ọ na-agagharị ya mere o kpebiri na ọ chọrọ inwe azụmaahịa nke ya ọ bụ naanị obere oghere na mgbidi 750 square mita na ya m kpọtara m na ụmụnne m ndị nwanyị abụọ, n'ihi ya, anyị nọ ugbu a na 30,000 square mita, anyị nwere ndị ọrụ 65 ruo 70 n'oge ọkọchị. N'ikwu okwu banyere ụlọ ahịa ahụ, ọ kpaliri gị ịmalite ịnya ịnyịnya ma ọ bụ na ọ bụ karịa maka nnukwu ụgbọ ala maka gị, ịchụso a na-aga n'ihu? Mba, achọpụtara m ịgba ịnyịnya ígwè n'ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe.
Papa m zụtara ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe mgbe m dị afọ 13. Enwere onye na-arụ ụgbọ ala ebe a na-ere igwe kwụ otu ebe, aha ya bụ Bob Joney. Bob welitere m sị, ee, hey, ị mara ezigbo mma, ị chọrọ ịnwale agbụrụ ịgba ịnyịnya? Egwuregwu mbụ m gbara mere ka m ruo mita 300 site na ngwụsị ma dabara na egwuregwu a.
E nwere ihe akaebe nke agụụ Ron na nook ọ bụla! Shoplọ ahịa a nwere ihe ncheta dị egwu. Enwere ụfọdụ iberibe na-apụta ìhè? ma obu inwere ajuju doro anya banyere
Ọfọn, ndị dị ka gị maara ụzọ ha na-agba na wiil ochie. Zọ anyị nwere ya, ị maara otu n'ime Eddy Merckx. Know mara na nke a bụ ngwongwo anyị kwọọrọ na ihe niile ị maara bụ na ndị mmadụ na-achọ ịmata etu ọ dị na ihe ọ dị ka ya ọbụlagodi ihe nketa ụlọ ahịa ahụ zuru ezu na ngosi! Ọbụna ụlọ ahịa nwere ntakịrị akụkọ ihe mere eme.
Ee, anyị kwadoro ụfọdụ ndị otu BMX mbụ anyị na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ n'afọ ọ bụla ka anyị mere uwe, n'ihi ya, anyị tinyere ụfọdụ n'ime ha na ngosi. 25th nke 35th nke ncheta 40th na Ron nwere mmasị ịkọ ahụmahụ ya na ndị ahịa.
You nweta ndị ahịa, aga m asị, 'Ronhere ọ dị? Enwere m ike izute ya Ee ee enwere m nke ahụ ma ọ masịrị m ịpụ na izute ndị mmadụ na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịnụ obi ụtọ nke ndị mmadụ .. Ndị ha bụ sitere n'ike mmụọ nsọ site na ihe ị maara na m mere ma ọ bụ Davis (Phinney) mere. .
Andy Hampsten. Ọ bụrụ na ọrụ Ron na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahịa ahụ ezughị, ọrụ Wheat Ridge abụghị ụwa a! Approachbịakwute gị na ọrụ ị nwere ike ịgwa m na anyị nwere ndị edemede ọrụ na-etinye igwe kwụ otu ebe na ogbe. 'You nụrụ ya nke ọma, 15!' E kewara ngalaba ọrụ na ndị ọrụ ọrụ.
Bikefit ụlọ nyocha? Kedu maka Wing Fit Fitness?! Have nwere ezigbo kpụ ọkụ n'ọnụ dabara usoro si retool. Mgbe m lara ezumike nká na 95, inwe ihe ndị ziri ezi na azụmahịa anyị bụ otu n'ime ihe ndị mere n'ezie ihe dị iche. Mgbe Andy Pruitt ọ batara wee malite ịmalite usoro iwu a, anyị tolitere na igwe kwụ otu ebe a.
Ugbu a, anyị nwere retool na-enye anyị ohere ịhọrọ ndị ahịa akọwapụtara nke ọma n'ezie. Anyị nwere mpaghara nyocha ahụike ebe anyị batara ma lelee mgbanwe gị maka nsogbu ndị ị nwere. Ka a sịkwa ihe mere ọrụ na nkwado ha ji buru ibu.
Site na nnukwute ngwa ahịa pụrụ iche, Trek, na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na nhọrọ uwe iji dakọtara, ọ dị mfe ịhụ etu aha ọka Wheat Ridge si aga! Anyị na ndị ahịa anyị nwere ezigbo mmekọrịta, uto anyị kasịnụ abụ site n'okwu ọnụ. Na Wheat Ridge Cyclery, anyị niile gbasara ime ka ndụ ndị mmadụ ka mma site na ịgba ígwè. Otu a ka anyị siri wuo azụmaahịa a.
A mbụ na klas ụlọ ahịa na a ezi ịgba ígwè akụkọ! Naanị minit 20 n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke obodo Denver. Wheatridge okirikiri. Needkwesịrị ịlele ebe a! “I meela, m nwere ekele maka nke ahụ! Daalụ Ron.
Anabata Anthony. ''
Kedu kilomita ole nke ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị na Colorado?
NaTrazọ ColoradoExplorer, mepụtara site naColoradoOgige ntụrụndụ na anụ ọhịa, gụnyere 17,099ụzọ ụkwụye 1,431 nzọ ụkwụ. Maapụụzọ ụkwụgụnyere 5,683Puku kwuru pukunke hikingụzọ ụkwụ, 6,821Puku kwuru pukunke ugwubiking ụzọ ụkwụ, 24,906Puku kwuru pukunke motoụzọ ụkwụna okporo ụzọ ndị a na-eteghị ete, na 1,746Puku kwuru pukunke a kpuchitereụzọ ụkwụ ịnyịnya ígwè.June 2. 2017 Nọvemba
Kedu ụzọ nzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe kachasị mma?
iri na iseIlszọ ụkwụ BikeKwesịrị Miles
Obere Pan Loop, Black CanyonNzọ ụkwụ. Ọnọdụ: Osimiri Ọhụrụ, AZ.
Osimiri JalamaGbaa ịnyịnya.
ValmontIgwe kwụ otu ebeOgige.
Ndagwurugwu sharkNzọ ụkwụ, Everglades National Park.
Sand Hog Hill, Mpaghara Ntụrụndụ Mba nke Cuyuna.
Na-aga na AnyanwụOkporo ụzọ.
Nkume CedarNzọ ụkwụ, DuPont State Nnukwu ohia.
Gba ịnyịnya ígwè bụ egwuregwu mara mma maka ọtụtụ ebumnuche dị iche iche, mana echere m na bọọlụ nwere ike bụrụ ihe dị mkpa karị, eziokwu ahụ bụ na ị nwere ike ịmịnye onwe gị na gburugburu ebe ndị mara mma dịka nke a, naanị ịdabere n'ụkwụ gị iji kpalie gị ugbu a enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na okporo ụzọ mana ihe ọ bụla masịrị gị, ọ bụrụ ugwu gafere, ụzọ ịnyịnya igwe dị jụụ ma ọ bụ ma eleghị anya, obere ala dị n'akụkụ ala enwere ihe maka gị yabụ echegbula ma ọ bụrụ na ị na-achọ mmụọ nsọ achọla anyị ọzọ na gcn chịkọtara anyị ụzọ ndị mara mma kachasị mma gburugburu ụwa ka ị nwee ike ịhazi njem njem ịnyịnya ígwè gị ọzọ. O nwere ike ịbụ na m na-eche ebe m na-aga taa mana m ga-ekpughe na mgbe e mesịrị n'ihi na ọ bụ otu n'ime aro m na ndepụta ahụ mana nke mbụ ka anyị bido site na ịrị elu agwọ na-adịghị mma Nke a na-arịgo nwere 17 nke ọmarịcha mma yabụ na ọ nwere ezi uche na ọ kwesịrị Nkem d. a na-akpọ mont vernier e mont vernier dị n'etiti alps n'akụkụ ụfọdụ ama site na ferratas dị ka pol de la madelaine, a na-arịgo ịrị elu a na nke mbụ ya na 2015 na ogbo 18 na njem njegharị ma kpatara ọgba aghara mgbe ọ bịara mon vernier Na-atụ anya ịnwale nke a ịgwa gị na aha maka akụkụ nke ehi bụ Scottish Gaelic dị ka a na-eji akụkọ ihe mere eme eme dị ka onye na-atụgharị mmiri mara maka okporo ụzọ ya ndị mara mma na ndị ọzọ, ikekwe karịa osisi, ebe ndị na-esetịpụrụ mgbe ụfọdụ ihe omuma putara na o nwere ike ime banyere ihu igwe.
Scotland enweghị ihu igwe anwụ na-acha dịka Ireland. Mana Bialuk Nabar nwere ike bụrụ otu n’ime ụzọ ndị mara mma n’ụwa, makwaara dị ka Applecross Pathit bụ akụkụ nke ụsọ oké osimiri ugwu 500a na-aga gburugburu Scotland, nke ụzọ cyan markbeaumont n’afọ gara aga mita 600 na kilomita iteghete Nke a bụ ezigbo ugwu na UK, mana nlele ahụ kwesiri ka mgbu ụkwụ ụkwụ n'ihi na a ga-akwụghachi gị ụgwọ maka echiche dị egwu nke agwaetiti Sky. Kpamkpam na-akpali akpali.
You nweghi ike inye aka ma legide anya na gcn a ghaghị ikwu na enwere ọtụtụ ebe dị iche iche ị ga-aga na agwaetiti ahụ mara mma, mana otu ebe mere ka ị nwee mmasị na isiokwu, nke m na-agaghị n'ezie ime mkpesa banyere, ime ihe n'eziokwu, n'ihi na ọ bụ ọmarịcha ọrịrị na-eduga ogologo n'ime ọnụ ọnụ ugwu ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ebe dị elu nke a nwere ike ọ bụghị ịrịgo maka ọdụ ụgbọ mmiri nke aldermosta bụ ebe obibi maka ụlọ abụọ na ụlọ oriri na ọ butụ butụ mana don 'erila? nke ukwuu, n'ihi na okporo ụzọ a bụ naanị ụzọ ị ga-esi banye na mmiri ma ọ bụrụ na ị nwere oge iji nwee ọ enjoyụ maka nlegharị anya ma nwee obi ụtọ n'oké osimiri, ọ na-agbago ọzọ ma ugbua ana m arịgo 380 mita na kilomita ise, yabụ na ọ bụghị obere ịrịgo, ịkwaga otu n'ime ihe kachasị mma na mmebi ugbu a, ọ bụghị usa mulhollanddrive na-arị elu site na la n'akụkụ ọdịda anyanwụ ridgecanyon azụ ogige ọhịa na ọ bụ ụzọ anepic nwere echiche dị egwu nke obodo la ugbu a ọ dịtụ iche na Ndị ọzọ na-arịgo na nke a ndepụta bụ na ọdịdị ala nke ụmụ mmadụ na-eme karịa ọdịdị, mana ọ naghị eme ka ọ bụrụ ihe na-erughị oke. Climrịgo ya n’onwe ya dị pacenti anọ cha cha, nke dịtụ nwayọ karịa mgbochi a m bịara, mana ọ bụ ọmarịcha ọrịrị nwere echiche mara mma banyere ihu igwe obodo na oke ugwu dị ịtụnanya. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ka ịrịgo gị nwayọ nwayọ, nke a abụrụla igwe igwe agba igwe ọkachamara maka youdrona n'afọ ndị na-adịbeghị anya ebe ọtụtụ kwagara obodo iji biri ma zụọ maka oge ịgba ọsọ Europe yana ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ya na ọtụtụ ọmarịcha ogologo ụzọ dị larịị mana nwekwara ọtụtụ ugwu ugwu na ihu igwe dị ezigbo mma ọ kacha mma okporo ụzọ ndị dị nso na Derona bụ ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri nke na-agbapụta nke ọma na-akwụsịghị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ nke Spain, mana akụkụ a dị nso na Totosa del Mar ihe dịka 20 kilomita ogologo na okporo ụzọ ifufe na ntụgharị wee bilie wee daa n'akụkụ Osimiri Mediterenian na ọ bụ ihe ịtụnanya, enwere ọtụtụ ebe ị ga-a coffeeụ kọfị ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụlagodi iri nri ma echere m na okporo ụzọ a ga-anọ ebe ahụ. ụzọ ndị kachasị mma n'ụwa Norway bụ mba na-adọrọ nnọọ mma ma nwekwaa ebe obibi mara mma nke mara mma Nnukwu ọnụ ọgụgụ mara mma ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ugbu a otu ụzọ nke kachasị mma na mba ahụ bụ nke e Ascent nke Rollers Snake, ma ọ bụ Mgbidi Troll, nke dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Norway.
Norway bụ mba pụrụ iche ọkachasị ebe ọtụtụ ịrịgo na-ebido n'oké osimiri tupu ha arịgo elu, na -emepụta fjords na ndagwurugwu pụrụ iche nke nwere ike ịmata ngwa ngwa. Trollstegen bụ nnukwu ihe atụ nke a, bido na 30 mita ọ na - emeri 700 Mita naanị itoolu kilomita ájá elu ị na-utịp mma mara mma glacier na kwa a echiche nke ụfọdụ pụrụ iche ọdọ mmiri.Ọ bụrụ na ị obi ike zuru ezu, e nwere ndị Troll Vegan Triathlon, nke na-eji na-agbago nke Trollwand na mgbe ahụ a pụrụ-ụzọ n'apata na n'elu nke Berges oh na-ada ka nke ndị enyi anyị na gtn ọ bụghị, ka anyị kwuo eziokwu, m ga-achọ ịsị na njem na-ada egwu.
Ndagwurugwu Eland dị nso na gcn hqyeah ọ dị ka ị dị nde kilomita site na ebe ọ bụla mgbe ị kụrụ ụfọdụ ụzọ unyi dị ịtụnanya na ndagwurugwu Inland adịghị? Ọzọkwa enweghị ezigbo ụzọ awara awara na-ada ka ebe dị mma maka ndagwurugwu m, ọ bụghị ya, dịka ọmụmaatụ, usoro ụzọ nke mba 81 site na obodo Eland ruo Aber enyịnworth n'ụsọ mmiri nke na-esote ụfọdụ ọmarịcha ụzọ mepere emepe na Mid Wales na ụfọdụ nnukwu echiche nke ọdọ mmiri mara mma, ị nwekwara ike ịpụ n'okporo ụzọ iji nwee ọ forụ? na di na nwunye nke gravel sectors a bụ ikekwe a quintessentially British ụzọ mejupụtara nke nza nke warara Okirikiri ala na Anes na nza nke nkpoda ugwu iji debe ihe na-aga kwa, ọ bụ na ịwụ ndepụta nke ọtụtụ British ọkwọ ụgbọala na anyị nwere ike na-eche na-enweta pụọ ma nwee obi ụtọ n'oge na-adịghị anya Ọ dị mma, nke a bụ mgbakwunye m na ndepụtaSout East Ireland site n'akụkụ ya kachasị mma ross lair inwexford ruo dugarvanin waterford 166 kilomita na mkpokọta ya mere ọ dị ogologo ma nke a bụ Ireland na nke kachasị mma n'echiche m n'oge ụbọchị okpomọkụ ọ mara mma, kamakwa na winters ụbọchị ọ dịka ọ dị mma mgbe ụfọdụ ebili mmiri na-agbagharị n'okporo ụzọ a ma mepụta ọmarịcha ihe nkiri na emere m ọzụzụ ọzụzụ n'oge oyi nke mere m gwa gị na ọ bụ ahụmịhe ugbu a enwere ọtụtụ obere obodo na obodo ntà na can nwere ike ịgbanwee maka iri nri, ị nwekwara Waterford Greenway nke ị kwuru na iwebata V a hụrụ isiokwu Ọmarịcha ụzọ kilomita 40 dị mma n'okporo ụzọ a. Echere m na ebe a bụ ọkacha mmasị m na echiche nke oke osimiri, lee ị nwere nke a? Ngwongwo ọla kọpa ochie, nke na-enye ụzọ ahụ aha ya, ụzọ ụsọ oké osimiri ọla kọpa na obodo Bun Mahon dị n'azụ ma hụ ụzọ a kachasị amasị ya nke ga-adị na ndepụta ahụ, ugbu a n'ụzọ dị iche na Shimanani- Kaido ụzọ? Na Japan, ọ bụghị otu, ọ bụghị abụọ, mana ngụkọta nke akwa mmiri isii na-agafe kilomita 70 site na agwaetiti Japan bụ Honcho ruo obere agwaetiti Shikoku, nke gafere agwaetiti isii ebe a, echere m na ị nwere ike ịma ugbu a nke otutu ihe ijuanya nke uzo ma enwere uzo uzo di iche na ogologo nke Shimananal-Qaeda nke putara na inwere ike inwe obi uto site na nenwegh nchegbu ma obu nsogbu banyere ihe nketa na omenala na anyi enwegh ike ichere ime nke a. ụzọ ugbu a bụ ụzọ dị egwu nke korota na Iceland ma eleghị anya ọ bụ ihe ngosi, mana enwere otu ebe pụrụ iche. Peninsula nke Snowfall na ọdịda anyanwụ Iceland bụ n'ezie ebe dị ịrịba ama iji gbaa igwe kwụ otu ebe.
Uzo zuru ezu n'okporo ụzọ gbara gburugburu peninsula ahụ bụ kilomita 150, yabụ na ọ bụghị ya. N'ezie ụzọ dị mkpirikpi, mana nke ga-akwụ gị ụgwọ site na ịche echiche dị egwu na ụbọchị doro anya. Nwere ike ịhụ ugwu Sneyfel Snes Jokel nke glacier kpuchiri, nke dị elu ruo mita 1500.
Ebe etiti ụwa kwesịrị ịdị n'ime ugwu ahụ, dị ka Jules Vernes Roman si kwuo na 1864, ọ bụrụ na ị banye n'okirikiri ala, mgbọrọgwụ dịpụrụ adịpụ na mbara ala dị egwu, mgbe ahụ Iceland na mpaghara Schneifeldt Snes peninsula bụ n'ezie maka gị na m ga-agwa gị ihe Echere m banyere ya Maka m, kedu ihe ị gaara enwe mmasị ịgbakwunye na ndepụta ahụ ihe anyị dabara na ya biko mee ka anyị mara na nkọwa ndị dị n'okpuru ebe a ma enwere m anya na ị nwere obere obere ụgbọala m na Copper Coast Road ebe a Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Ireland na ozugbo ihu igwe dị mma na m nọ ebe a na Grail, ọ ga-aka mma ka m gaa n'ugwu iji hụ ma m ga-ahụ ụzọ ọhụụ ma ọ bụ ụzọ dị mma, daalụ maka ikiri, hụ gị n'oge na-adịghị anya, jisie ike
Okporo Coloradozọ Colorado ọ dị egwu?
N'ihe m maara, ọ dịbeghị onye ọ bụla egburu ma ọ bụ merụọ ahụ ma ọ bụ ọbụna nwee nnukwu nsogbu site n'aka onye ọ bụla na-akatọ ya na akụkọ ntolite niile nkenzọ ụkwụ. Ọ dịghịkwa onye ọ bụla gburu site na àmụmà nanzọ ụkwụ, na àmụmà bụ n'ezie na isiIhe egwu.Ọkt 9 2015
Enwere bea na Trazọ Okporo Coloradozọ Colorado?
Burunsogbu tinyereNzọ ụkwụna ebili dika ojiibuọnụọgụgụ bilie (Ebe ahụabughi grizzlies naColorado) na ewu ewu nkeNzọ ụkwụna-abawanye. Ọ dabara nke ọma, ole na oleNzọ ụkwụọrụ akụkọ ọjọọibuna-ezute, mana ndị na-eme nwere ike imebi ihe naNzọ ụkwụahụmahụ.
Colorado ọ dị mma maka ịgba ígwè?
Coloradonwere ọtụtụ ebe ndị na-anya igwe ugwu na-enwe ọmarịcha ịnya ụgbọ na ịhụnanya zuru oke. Site na mkpọda ọdịda anyanwụ ruo n'ihu, ị ga-ahụ ugwuigwe kwụ otu ebeụzọ ụkwụ nke ga - eme ka ị tụgharịa uche na echiche ha na - egbu mmụọ. Nke a bụ nnukwu ugwu nke ugwu ahụ mara mmaigwe kwụ otu ebegburugburuColorado'sNkume.Ọgọst 2 2019
Ọ bụ Colorado Springs igwe kwụ otu ebe?
AKWKWỌ COLORADO, Agba. -Colorado Springsna-ekwusi ike Ọnọdụ ọlaọcha ya dị ka aIgwe enyi na enyiCommunity, dị ka mbaigweotu nkwado nke otu League of American Bicyclists.Colorado Springsedepụtara ya dị ka Ọnọdụ ọlaọcha na 2012Ọnwa Ise 20, 2017
Kedu ka ị si eweghachi na okporo ụzọ Colorado?
Enwere ọdụ ụgbọ ala na Highway 9 ihe dị ka kilomita 0.2 n'ebe ndịda nke ụzọ ụkwụ ahụ. Bulie bọs na -aga ugwu n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke okporo ụzọ awara awara na bọs na-aga ndida n'akụkụ ọdịda anyanwụ. CT gafere ebe mgbada nke ọla kọpa Mtn, na-eme nke a kachasị mfeibugharịisi.
Bikgbọ okporo ígwè ndị siri ike ịnyagharị?
Okporo ụzọ anyịnya igwedị ngwa ma dị mfe iji ụkwụ na-aga n'okporo ụzọ. Ugwuanyịnya igwedịSiri nnukwu ikeka ị ga-eji ụkwụ na ụkwụ nwayọ nwayọ. Ma ha nwere cushynọkwasi, onye ziri ezina-agba ịnyịnyaỌnọdụ, ma nwee ike ịgafe n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
Etu esi achọta ụzọ kacha mma igwe kwụ otu ebe na Colorado?
Ma ị hụrụ n'anya na-agba ịnyịnya ugwu gafere ma ọ bụ na-emeghe na mbara ọzara, ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ gị na njem ma ọ bụ nanị na-na-eduga na-esote obodo; na Colorado Bicycle & nkwupụta ụda; Byways map ga - enyere gị aka ịhọrọ ụzọ nke ga - adịrị gị mma na ikike gị. Nwee ịnyịnya! Pịa map dị n'okpuru iji malite saịtị ahụ.
Kedu otu ogologo okporo ụzọ Colorado Mountain Bike Trail?
Ọ na-agabiga ugwu Colorado Rocky dị egwu n'etiti ọnụ ọnụ, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, na usoro okike dị egwu. Thezọ ụkwụ ahụ na-arị elu nke ukwuu wee daa site n'ịdị elu nke mita 10,000 (mita 3,048) wee gbagoro n'elu 13,000 ụkwụ (3,962 mita), dị n'okpuru Coney Summit.
Ebee ka ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị na Colorado Springs?
N’ebe ndịda nke na-agbada ogbe ndịda Colorado Springs, Bear Creek Trail na-enye njikọ dị mkpirikpi site na Bear Creek Regional Park ruo Interstate 25. N’akụkụ nke ọzọ nke okporo ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike iburu Pikes